Microsoft Exchange Server 2010 ကို Microsoft Windows server 2008 R2 နှင့် realworld မှာ ဘယ်လိုတင်မလဲ — MYSTERY ZILLION
Microsoft Exchange Server 2010 ကို Microsoft Windows server 2008 R2 နှင့် realworld မှာ ဘယ်လိုတင်မလဲ
November 2012 edited November 2012 in Windows Server
Microsoft Exchange Server 2010 ကို Microsoft Windows server 2008 R2 နှင့် realworld မှာ ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ Domain Register လုပ်တာ public IP ၀ယ်တာက အစပေါ့နော်။
ဥပမာဗျာ ..ကျနော် စပြီး exchange ကိုတင်မယ်။ အဲဒီမှာ Domain ကို register လုပ်မယ်။ .com ပေါ့။ အဲဒီ .com ကို godaddy မှာ၀ယ်မယ်ထားပါတော့။ .com ၀ယ်လိုက်ရင် public IP ရမလား။
public IP ကို ဘယ်မှာ၀ယ်ရမလဲ။ ပြီးတော့ .com ၀ယ်လိုက်ရင် ရှေ့က NETBIOS name ကို ကိုယ်ပိုင် Domain server မှာ ကို်ယ်ကြိုက်သလို ရေးလို့ရမလား။ ဥပမာ..dropbox.com ပေါ့။
ွှအဲဒီလိုမျိုးပေးလို့ရမလား။ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့် Domain name အကုန်လုံးကို (dropbox.com) အဲဒီလို၀ယ်ရမှာလား။ အဲဒါဆိုရင် dropbox.com အတွက် public IP ပါ တစ်ခါတည်းရမလား။
public IP ကို တစ်ခါတည်းမရဘူးဆိုရင် register လုပ်ထားတဲ့ Domain name (dropbox.com နဲ့ public IP ) ကိုmapping လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မလား။ ပြီးတော့ ကျနော်သိချင်တာ က Domain Controller (၁)လုံး (PDC)၊ member server + (BDC)(၁)လုံး၊ member server + Edge Transport server(၁) လုံး ၊ member server ၊multiple exchange server (၁)လုံး ကို သုံးမယ်။ အဲဒီတော့ (dropbox.com ) Domain ကို register တစ်ခုထဲဘဲလုပ်ဖို့လိုမလား။ကျန်တဲ့ member server တွေအတွက် Domain register လုပ်ဖို့လိုမလား။ godaddy မှာ domain register လုပ်ထားတဲ့ domain name နှင့် MPT က ၀ယ်တဲ့ public IP ကို mapping လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလား။အဲဒီလို mapping လုပ်ပြီးရင် ကော် ကိုယ့် network ထဲမှာ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲ။ Mapping လုပ်ပြီးသား Domain နှင့် ၀ယ်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်း ကို ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ရမလဲ။IP တွေကို ဘယ်လို setting ချသင့်သလဲ။ပြီးတော့ Exchange server မှာ Edge Transport server နှင့် multiple exchange server ကို lincence ဘယ်လိုမျိုး၀ယ်ရမလဲ။ package တွေကဘယ်လိုရှိသလဲ သိချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Edge Transport server နှင့် multiple exchange server (Mail Box, Client Access Server, Hub Transport Server) အဲဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသိချင်ပြီး ဘယ်လို configure လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အခုလိုစုံလင်အောင် မေးရတာ နားလည်ပေးစေချင်တယ်။
အခုလိုရှည်ရှည်ေးေးတွေမေးရတဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူး...ဒါပေးမယ့် အရမ်းသိချင်နေတော့လဲ မေးချလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ.........
1. You cannot buy top level domain .com, you can buy only something.com
2. Most of the domain registration are only name. You can get public IP from ISP.
3. You will need to map your domain and public IP.
4. For Exchange Server license, you may need to contact local sale representative or contact to Microsoft. You need to check on http://www.microsoft.com/exchange/en-us/how-to-buy.aspx
5. For Exchange Server Configuration, I want to suggest, you should read the proper documentation. Most of the configuration are straight forward and not complicated.
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ်...လျှာရှည်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့...
၁။ အဲဒါဆို something.com ကို public IP နဲ့ mapping လုပ်ပြီးသွားရင် ... PDC ဖြစ်သွားပြီဆိုပါတော့ဗျာ။
၂။ something.com ...Domain Controller ကို နောက် meberserver အနေနဲ့ ခွွဲထားမယ်..... some.something.com ဆိုပြီးခွဲထားမယ်...
အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် register နောက်တစ်ကြိမ်းထပ်လုပ်ရသေးလားခင်ဗျာ။ public IP ရောထပ်၀ယ်ရသေးလားခင်ဗျာ...
You can add subdomain by yourself. It does not need to register again.
Domain က ဝယ်ရင် နာမည်ပဲ ရပါတယ်။ A Record ဒါမှမဟုတ် NS Record ဒါမှမဟုတ် CName တစ်ခုခုနဲ့ server ကို ပြန်ချိတ်ပေးရပါတယ်။ VPS တစ်လုံး လစဉ်ပေးနဲ့ ငှားရင်တော့ Public IP တစ်ခုရပါတယ်။
Domain name က ညွှန်ပြထားတဲ့ IP ကိုသွားခေါ်တာပဲရှိပါတယ်။ Server ကနေ ဒီ domain နဲ့လာရင် ဘယ် directory ကို သွားဆိုပြီး ညွှန်ပြဖို့ အတွက် ရေးရပါတယ်။
ကျွန်တော် က Nginx နဲ့ Apache အတွက်ပဲ သိတဲ့အတွက် Microsoft server တွေမှာ ဘယ်လို config လုပ်ရတယ် မသိပါ။
Domain တစ်ခု ဝယ်ပြီးရင် subdomain ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြိုက်သလောက် ထည့်လို့ရပါတယ်။
လက်ရှိ ကျွန်တ​ော် A Record ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Example ပါ
AD + DNS ကို သီးသန့်ထားပြီး Member server ပေါ်မှာ exchange server 2010(Hub Transport+Client Access+Mail box) server တွေတင် လို့ရမလားခင်ဗျာ။ Edge Transport server ကို ကော် member server မှာတင်လို့ရမလားခင်ဗျာ။ Mail box server ကို သီးသန့်ထားမယ်ဆိုရင် ဘယ် server ပေါ်မှာတင်လို့ရမလဲခင်ဗျာ။
Mail Server အတွက် MX record ကို A record ထည့်တဲ့ DNS Management မှာ သွားထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ A record အစား MX record ထည့်နိုင်ပါတယ်။
That's what I said you need to read the proper document. There was some Microsoft guys in MZ but I have not seen them for quite long time. I do not use any Microsoft server for many years.
you need to watch training video like trainsignal. This video explain you how to install exchange roles and details.
Here is CBT Nuggets - 70-662 Exchange Server 2010 Configuring Training
CBT Nuggets - 70-662 Exchange Server 2010 Configuring
You'll learn the exact steps you need to successfully implement or upgrade your Exchange infrastructure. Plus, you'll dig deep into the new features of Exchange 2010 that you'll want to implement immediately, such as Database Availability Groups, Federated Sharing, and Messaging Records Management.
AND, you'll leave with the knowledge you need to be successful with Microsoft's certification exam
Only Available for registered users ! Register now , its totally free. Click here to register.
* Video 1: Introduction to Microsoft Exchange and Exchange Certification |13:40
* Video 2: Understanding Exchange Roles and Components |14:26
* Video 3: Preparing your Infrastructure and Installing your First Exchange Server |34:27
* Video 4: Mailbox Server Role: Databases, Mailboxes, and Public Folders |31:05
* Video 5: Mailbox Server Role: Addresses, Folders, Groups, Contacts, and Resource Mailboxes |30:53
* Video 6: Client Access Server Role: Outlook, OWA, and the Exchange Control Panel |25:18
* Video 7: Client Access Server Role: POP & IMAP, ActiveSync, and Outlook Anywhere |23:50
* Video 8: Hub Transport Role: Message Transport, Connectors, Accepted Domains, and Remote Domains |29:39
* Video 9: Hub Transport Role: Email Address Policies, Transport Rules, and Journal Rules |13:51
* Video 10: Edge Transport Role: Installing and Configuring |25:43
* Video 11: Edge Transport Role: Message Filtering and Anti-Spam |28:37
* Video 12: Understanding and Implementing Federated Sharing |12:49
* Video 13: Role-Based Access Control in Exchange Administration |28:11
* Video 14: Exchange Backup and Data Recovery |23:29
* Video 15: Exchange High Availability: Database Availability Groups |28:55
* Video 16: Exchange High Availability: Public Folders and Non-Mailbox Servers |14:38
* Video 17: Exchange Monitoring and Reporting |20:26
* Video 18: Exchange from the Outside World: Security, Certificates, Name Resolution, and Autodiscovery |22:55
* Video 19: Migrating from Previous Exchange Versions to Exchange 2010 |12:43
* Video 20: Managing Exchange 2010 with Windows PowerShell |15:00
Size : 375.76 MB